सम्भोग गर्दा श्रीमतीलाई खुसी पार्ने तरिका - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ सम्भोग गर्दा श्रीमतीलाई खुसी पार्ने तरिका
सम्भोग गर्दा श्रीमतीलाई खुसी पार्ने तरिका
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७७ चैत्र २५ गते, २०:०० मा प्रकाशित
तुलनात्मक रुपमा पुरुषलाई उत्तेजनामा ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा मानिदैन । तर महिलाको सन्दर्भमा यो अलि कठिन जस्तो देखिन्छ महिलामा भन्दा बढी पाइने हार्माेनका कारण पुरुषहरु थोरै समयमा नै यौनका लागि तयार भइसक्छन् ।
यहाँसम्म कि केहि नग्न तस्बिरको भरमा नै उनीहरु उत्तेजित अवस्थामा पुग्छन् । हामी सबैलाई थाहा नै छ, जनेन्द्रियहरुमा भएको रक्त प्रवाहको कारण नै व्यक्तिमा उत्तेजना पैदा हुन्छ । यसका लागि यौन अंगहरु रसाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन । यौन अंगमा आएको तरल पदार्थकै कारण मात्र महिला यौनको लागि पूर्ण रुपमा तयार भएको हुन नसक्ने भनाइ विभिन्न विज्ञहरुको रहेको छ ।
उनीहरुले यसलाई यौनको लागि तत्पर रहने संकेत रुपमा मात्रै लिएका छन् । भनेपछि महिलालाई यौन जीवनमा कसरी खुशी बनाउने त? कसरी उनीहरुमा सन्तुष्टि प्रदान गर्न सकिन्छ ?
विस्तारै र सामान्य रुपमा सुरु गर्नुहोस्
पूर्ण रुपमा यौन गतिविधिमा प्रवेश गर्नुअगावै महिलाहरु हतार गरेको मन पराउँदैनन् । त्यसैले उनीहरुको अघि हतार नगरीकन विस्तारै क्रमिक रुपमा यौन गतिविधीलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । तर, आफूलाई यौन चाहना तृप्त छ भने के गर्ने? यसबेला महिलालाई माया र सद्भावपूर्ण रुपमा आफ्नो कुरा बताउनु पर्छ ।
त्यसपछि, विस्तारै उनको प्रत्येक अंगलाई खेलाउदै उनको प्रतिक्रिया बुझ्नु पर्छ । महिलाहरु शारीरिक सम्बन्धका समयमा आफ्नो पार्टनरले एकै अंगभन्दा क्रमिक रुपमा शरीरका सबै भागलाई महत्व दिएको मन पराउँछन् ।
उनको चाहना बुझ्नुहोस्
कहिलेकाहीं शारीरिक सम्बन्धका क्रममा तपाईंको पार्टनर तयार नहुन पनि सक्छन् । तसर्थ त्यस समयमा भने तपाईंले आफ्नो पार्टनरको मुड बुझ्दै उनको रुचि बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
यौनको मामिलामा व्यक्तिले अक्सर आफ्नो महिला पार्टनरको शारीरिकभन्दा मानसिक स्वीकृतीको भाव बुझ्नु पर्दछ । उनी के कुराको चाहना राख्छिन्, त्यो आफ्नो भावद्वारा व्यक्त गर्छिन् । उनीहरु यौनको मामिलामा खुलस्त रुपमा आफ्नो सहकर्मीसँग प्रस्तुत नहुने हँुदा उनको चाहना बुझ्नको निम्ति सक्दो प्रयास गर्नु पर्दछ ।
काउकुती लगाउनुको अर्थ महिलाको प्रकृतिअनुसार उनलाई सोही किसिमले राजी बनाउनु भन्ने हो । केही महिलाहरु भावनात्मक रुपमा सन्तुष्टि भएकै कारण यौनजीवनमा स्वतः खुशी हुन्छन् । तर, केहि महिलाको हकमा भने यो लागू भएको देखिदैन् । उनीहरु यस मामिलामा केहि लजालु र असहज महसुस गर्छन् ।
तसर्थ, आफ्नो महिला साथीको मुड बुझ्नु छ, भने उनीहरुलाई काउकुती लगाएर उनीहरुको प्रतिक्रिया जाँच गर्न पनि सकिन्छ ।
प्रेम अभिव्यक्तिको माध्यम चुम्बन
महिलाहरु प्रायजसो आफ्नो प्रेम चुम्बनको माध्यमबाट अभिव्यक्ति गर्न रुचाउँछन् । त्यसैले पनि उनीहरु साना बालबालिकादेखि आफ्ना अभिभावकसम्मलाई आफ्नो चुम्बनद्वारा नै आफ्नो प्रेम प्रकट गर्छन् ।
यौनसम्पर्कका क्रममा यदि तपाईंले उनलाई चुम्नुहुन्छ भने उनीमा आत्मीयताको भाव पैदा हुन्छ । र, यसबाट उनी थप खुशी हुन सक्छिन्।
केही समय प्रतिक्षा गर्नुहोस्
तुलनात्मक रुपमा महिलामा उत्तेजना पैदा गर्न केही समय लाग्ने हुँदा उनीहरु पूर्ण रुपमा तयार नहुन्जेलसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ । तपाईको हतारले उनीहरुमा तपाईंप्रति नकारात्मक भाव पैदा हुनसक्छ । त्यसैले पनि उनी तयार नभएसम्म कुर्ने गर्नुपर्छ ।
केहि समय कुर्नाले महिलामा थप रोमाञ्चकता समेत पैदा हुन पुग्छ ।
यसबाहेक यसबाट उनी तपाईंका साथ खुशी त रहन्छिन् नै यससँगै उनको मनमा तपाईंप्रतिको सम्मान अझ बढ्न सक्छ । यसबाट आपसी सम्बन्ध प्रगाढ समेत बन्न पुग्छ ।
मायालु पाराले उनीहरुलाई राजी गराउनुहोस्
आफ्नो पार्टनरलाई खुशी पार्नको निम्ति उनीहरुलाई मायालु पाराले राजी गराउनु पर्छ । उनीहरुलाई यौनक्रियामा आफ्नो पार्टनरले वक्षस्थल चलाएको खुब रुचाउँछन् । धेरैजसो महिलाहरु यसैबाट चरमोत्कर्षमा समेत पुग्छन् । यस्तै शारीरिक सम्पर्कका क्रममा राजी गर्न भने बिर्सनु हुँदैन ।
आफ्नो पार्टनरप्रति इमान्दार बस्नुहोस्
धेरै पुरुषहरु यस विषयप्रति अन्जान हुन सक्छन कि आफ्नो पार्टनरप्रतिको इमान्दारिताले पनि यौनजीवनमा विशेष महत्व राख्दछ । हो, आफ्नो अन्य समयको इमान्दारिताले पनि तपाईंको यौनजीवनमा विशेष भूमिका निर्वाह गरको हुन्छ । आफ्नो पार्टनर आफूप्रति इमान्दार रहेकै कारण पनि महिलाको तपाईंप्रति गर्ने गुनासो कम रहन्छ । र, यो कुरा यौनको हकमा पनि लागू हुने देखिएको छ ।
तसर्थ, उनीहरुलाई यौन जीवनमा खुशी राख्ने भरपर्दाे माध्यम भनेको उनीहरुमा आफ्नो विश्वास कायम राखिराख्नु पनि हो ।